Ny andinindininy mikasika ny jnja 2012 - Fiangonana Apokalypsy Maneran-tany
1. Inona izany hoe JJA?
Ny JJA (Journée des Jeunes Apocalypse) na andron’ny tanora Apokalypsy,dia hetsika lehibe anakiray izay natomboka teto Antananarivo tamin’ny 20 Nov 2011 tao Analamanga Parc, 700 isa ireo tanora tonga nanatrika tamin’io hetsika voalohany natao io.
2. Inona izany hoe JNJA?
Amin’ity taona 2012 ity dia iandreketan’ny Nasionaly Sampana Tanora ny fikarakarana ny JJA ka nanjary hoe JNJA no iantsoana azy, izany hoe natao ho Nasionaly ny hetsika amin’ity taona 2012 ity, mba ahafahan’ireo tanora Apokalypsy marenana ny nosy handray anjara feno.
3. Inona no tanjon’ny hetsika?
Firaisan-kina sy fitiavana, fifandraisan’ny samy tanora Apokalypsy manerana ny nosy, ary fotoana hialàna voly sy hifaneraserana ihany koa, hifampaherezana sy hifampitàna traikefa.
4. Iza avy no mpandray anjara amin’ity JNJA 2012 ity?
Ny zatovo sy ny tanora rehetra feno 15 taona manerana ny nosy , na mpikambana rantsana skoto na oliva izy na tsia, rehefa mpikambana Apokalypsy (resy lahatra F.A.M) dia afaka mamonjy ny JNJA avokoa.
5. Aiza no atao ny JNJA ary rahoviana?
Ao Antananarivo no atao ny JNJA 2012. ary ny 05 – 06 – 07 – 09 Septambra 2012 izao
6. Inona avy ny zavatra hisy mandritra izany hetsika izany?
Hetsika ara-kolontsaina toy ny festival , fampisehoana sns
Hetsika ara-panatanjahantena: foot, basket, sns
Fialamboly : fitsangatsanganana
Seminera lehibe hoan’ny tanora loha-hevitra “Ny tombam-bidin’ny Tanora Apokalypsy
7. Inona no takiana amin’ny mpandray anjara:
Baiboly, fitaovam-panoratana, lamba firakotra, fitaovam-pidiovana
vary 3kg isan’olona
vola 60.000 fmg na 12.000 Ar
>Manomboka ny andron’ny 05 septambra no raisina an-tanana ny mpandray anjara rehetra.
8. Inona no tokony hatao dieny izao?
Samia mandrafitra ny lisitry ny tanora izay handeha isam-piangonana ianareo mpiandraikitra, ahitana ny anarany, ny taonany, ary ny adiresy sy n* tel raha misy , mariho na lahy na vavy. (asiana sonian’ny filoham-piangonana nihaviana ilay lisitra)
Alefa aty amin’ny foibe FAM, mialohan’ny Talata 31 Jolay (daty farany) ny lisitr’ireo mpandray anjara isam-piangonana, Asio fanamarihana hoe “JJA 2012 –lisitra fiangonana nihaviana.”
Tanora eo amin’ny 1500 isa manerana ny nosy no hoavy amin’io fotoana io, koa samia mifanentana sy mifampilaza, ary miomana dieny izao !
Aza hadino : Ny 31 Jolay 2012 no farany fandraisana ny lisitry ny tanora misy ny anarana sy ny fiangonana niaviana avy aty amin’ny faritany
Hisy Tshirt, Casquettes sns azo vidina hatao fahatsiarovana !!
Fanazavana fanampiny :
– Ptd Niry : 033.07.425.62 / 034.96.015.04
– Serasera : Zk Andry : 033.14.764.43
– Fandaminana : Eva : 034.31.794.88
Batisa jona 2012